Loko pastel: inona avy izy ireo ary palet sy hevitra 50 hanambatra azy ireo | Famoronana an-tserasera
Lola curiel | | General, Inspiration, Palety miloko, dia midika hoe
Ny loko pastel dia fironana. Amin'ny famolavolana sary dia nahazo andraikitra vaovao izy ireo ary tsy ampiasaina amin'ny tetikasa mifandraika amin'ny ankizy na amin'ny maha-vehivavy fotsiny, fa lasa hatsarana tena sarobidy! Raha te hanomboka mampiditra am-pahombiazana ireo feo ireo amin'ny volavolanao ianaoTsy azonao atao ny tsy mahita an'ity lahatsoratra ity izay ilazako anao hoe inona ny loko pastel ary mizara palette sy hevitra 50 hanambarana azy ireo aho.
1 Inona avy ireo loko pastel?
2 Ahoana ny fomba fampifangaroana loko pastel
2.1 Mamorona fitambarana monochrome ary milalao amin'ny hamafin'ny loko
2.2 Miloka amin'ny loko mibahan-toerana
2.3 Mampiasà fandresena azo
2.4 Ampahafantaro ny feo tsy miandany
2.5 Mianara amin'ny sinema
2.6 Mitadiava aingam-panahy amin'ny natiora sy ny sary
3 Palety pastel 50
Inona avy ireo loko pastel?
Amin'ny lafiny teknika dia azontsika atao ny mamaritra ny loko pastel ho loko izay miorina amin'ny hazavana avo sy ny saturation ambany na antonony Fa inona no ananan'izy ireo izany anarana izany? Tsy maintsy tadiavina ny tontolon'ny sary hosodoko. Tamin'ny Renaissance dia nanomboka nampiasaina ny "pastels", pensilihazo mitovy amin'ny crayons vita amin'ny loko vovoka sy binder (résin, rubber na tanimanga). Tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia nanjary nalaza be izy ireo ary mpanao sary hosodoko amin'ny haben'ny Edgar Degas na Jean Monet no nampiasa azy ireo indray tamin'ny taonjato faha-XIX.
Na izany aza, Androany dia mampiasa ny teny hoe "pastel" isika hanondro ireo loko izay mampita fahatsapana fahalemem-panahy. Ny loko dia mifampiresaka ary, mahazatra, ireo feo ireo dia mifandray amin'ny zazakely sy ny vehivavy, satria mampita fahatsapana fahatoniana sy hatsaram-panahy izy ireo. Raha ny marina, marika toa Evax sy Tampax dia nandray an'io hatsarana io amin'ny horonantsary sy ny atiny fampiroboroboana mikendry indrindra ny vehivavy.
Famahanana Instagram an'ny @drcord
Na izany aza, miova tsy tapaka ny lahateny amin'ny fanaovana doka sy famolavolana sary. Amin'ny tambajotra sosialy, toy ny Instagram, ireo mpanakanto sy mpamorona dia nisafidy ireo paleta miloko ireo hanehoana ny fahaizany mamorona, manala ny feo pastel amin'ny fotoana maro amin'ny dikany efa nomena azy ireo. Tamin'ny taona lasa, ireo alokaloka ireo koa nanjary fironana teo amin'ny tontolon'ny lamaody ary efa hitantsika ny nanondrahana lamba fitaratra ireo varavarankely mba hitsena lohataona Te hianatra ny fomba fampifangaroana ireo loko ireo ianao raha hampiasa azy ireo amin'ny volavolanao?
Ahoana ny fomba fampifangaroana loko pastel
Mamorona fitambarana monochrome ary milalao amin'ny hamafin'ny loko
Safidy tsara ho an'ny manambatra loko pastel tsy misy ahiana dia ny mamorona a palette monochrome avy amin'ny loko pastel tokana. Milalao amin'ny hamafin'ireo loko, dia ho afaka hampiditra ny mifanohitra amin'ny fitambarana ianao ary hahatratra ny hatsarana mahafinaritra indrindra. Afaka mampiasa fitaovana ianao, toy ny Adobe Color, hamoronana an'ity karazana palette ity.
Miloka amin'ny loko mibahan-toerana
Tsy mila mahafoy ny loko isan-karazany ianao, raha te hampiasa loko pastel tena hafa dia azonao atao! Tsotra, miloka amin'ny iray amin'izy ireo mba ho kofehy iraisana ary ampiasao ho loko fototra hanomezana lojika sy firaisan-kina amin'ny endrika. Raha manao izany ianao, dia tsy ho olana aminao ny fampihavanana ny alokaloka pastel isan-karazany.
Mampiasà fandresena azo
Misy fitambarana mirindra sy mahafinaritra ho antsika, araraoty! Ohatra, pastel manga sy pastel orange, mifanohitra amin'ny chromatic, dia manambady tanteraka izy ireo. Hevitra tsara ihany koa ny manambatra ny manga pastel miaraka amin'ny aqua an-dranomasina sy ny feo mavo. Raha mampiditra loko nudes amin'ny palette ianao dia hoentina mivantana mankany amin'ny fahavaratra.
El Green pastel azo ampiarahina amin'ny chromatic mifanohitra aminy, ny mavokely. Raha te hampanan-karena ny loko misy loko ianao, dia afaka mampiasa loko maitso sy mavokely isan-karazany. Ny lokon'ny tany, ny khaki na ny beige dia mpiara-miasa tsara amin'ny maitso pastel ihany koa. Ny pastel mavokely, mifanaraka tsara amin'ny lilac, analog amin'ny kodiarana miloko. Raha ny marina dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra izy io, satria azo ampifangaroina amin'ny saika malefaka rehetra.
Ampahafantaro ny feo tsy miandany
Azonao atao ny manambatra loko pastel feo tsy miandany, toy ny volondavenona na fotsy. Izy io dia endrika iray volavola mandanjalanja. Raha ny tanjonao dia ny hanjakazakan'ny "estetika est pastel" dia ataovy mpameno ny loko tsy miandany ary ny lokon'ny loko pastel no fototry ny lokon'ny loko.
Mianara amin'ny sinema
Sehatra avy amin'ny sarimihetsika «The Florida Project»
Amin'ny tontolon'ny sinema, ny loko dia iray amin'ireo lafiny mitandrina indrindra amin'ny toerana. Raha ny marina, misy ny sarimihetsika izay, ankoatry ny atiny, dia miavaka ary ankasitrahana tokoa noho ny fikarakaran'izy ireo ny loko. Maninona raha mianatra amin'ny matihanina? Mba mamorona palitao loko azonao atao aingam-panahy avy amin'ny seho amin'ireo sarimihetsika ireo, ampifanaraho izany arakaraka ny tonony izay mibahan-toerana ao amin'izy ireo ary mijery manokana ny fomba fampiharana azy ireo. Ohatra, amin'ny sarimihetsika toa "Ny tetikasa Florida" na "hoditra" mazava tsara dia manolo-tena ho an'ity karazana estetika ity.
Mitadiava aingam-panahy amin'ny natiora sy ny sary
Ny natiora dia a loharanon'ny aingam-panahy sy hevitra tsy mety ritra. Ny morontsiraka, masoandro mody, ny lokon'ny avana, misy toerana maro izay misy loko pastel ary efa vonona hampiasainao izy ireo! Mandehana sary amin'ny tontolo voajanahary sy ny tontolo an-tanàn-dehibe, ampiasao ny eyedropper hahitana loko sy mamorona palette manokana sy tsy manam-paharoa.
Palety pastel 50
avy eo avelanay safidy palety ho anao izahay izany dia hanome aingam-panahy anao ary azonao ampiasaina amin'ny volavolanao. Tsy ny loko rehetra mamorona azy ireo dia tononkalo pastel, fa indraindray mahaliana ny mampiditra loko mazava kokoa na loko mainty kokoa izay manampy mifanohitra amin'ny elanelam-potoana. Ny zavatra rehetra dia miankina amin'ny zavatra tianao ho tratrarina amin'ny volavolanao, raha te-hamorona sary na firafitra mifanohitra ianao, monochrome, na ambany, misafidiana palety amin'ny feo malefaka kokoa na amin'ny gradients mitovy loko aminy. Fa, azonao atao ny mampiditra loko manimba ny hatsarana malefaka ny pastel shade Ny olana ezahina!
Mampiasà ireo loko mitovy amin'ny atolotray anay, soraty ireo kaody miloko hita eo amin'ny ilany ankavanan'ny sary. Andramo milalao amin'ny alikaola! Afangaroy izy ireo, mamorona fitambarana vaovao ary ampifanaraho amin'ny fombanao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Loko pastel: inona avy izy ireo ary palet sy hevitra 50 hanambarana azy ireo
Fandaharana hamoronana horonan-tsary